कोहलपुर नगरको ३७ लाखको वृक्षारोपण कस्ले खायो ? | मेरो नेपाल अनलाइन
Home मुख्य समाचार कोहलपुर नगरको ३७ लाखको वृक्षारोपण कस्ले खायो ?
कोहलपुर नगरको ३७ लाखको वृक्षारोपण कस्ले खायो ?
Posted By: Mero Nepal Onlineon: १० जेठ, २०७४ In: मुख्य समाचार, राष्ट्रियNo Comments
बाँके, जेठ १० – कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय स्थापना भएसँगै कोहलपुरमा एउटा विषयले निकै चर्चा बटुल्यो । नगरपालिकाको कार्यकारी पद सम्हाल्न कोहलपुर आईपुगेका गोबिन्द पाण्डेले कोहलपुरवासीलाई सुनौलो सपना देखाए ।
ठुलो रकम खर्चिएर गमलामा फुलहरु रोपिएको भएपनि अभियानले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयले गमला खरिद गरि कोहलपुरलाई हरित नगर बनाउने अभियान संचालन गरेपनि हाल अधिकाशं गमलाहरु प्रयोग बिहिन भएका छन । यकाध प्रयोगमा आएका गमलाहरुमा लगाईएका फुलहरु समेत पानी तथा गोडमेल अभावका कारण सुक्न थालेका छन ।
ऊ आमाका लागि वृद्धाश्रममा केही खर्च पठाइदिन्थ्यो, एकदिन वृद्धाश्रमबाट उसलाई चिठी आयो